Mustaf Dhuxulow oo ka hadlay is hortaagga lagu sameeyay xafladdii lagu taageerayay – AfmoNews
Mustaf Dhuxulow oo ka hadlay is hortaagga lagu sameeyay xafladdii lagu taageerayay
Musharax Madaxweyne Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow ahna Xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Somaliya ayaa ka hadlay is hortaaggii lagu sameeyay munaasabaddii lagu taageereeyay musharaxnimadiisa, ee lagu waday in ay ka dhacdo Magaalada Muqdisho.
Ciidamada Booliska iyo kuwa Hay’adda Nabad Suggida ayaa gelinkii dambe ee Khamiistii tagey Hotel Afrik, oo la qorsheeyay in munaasabadaasi lagu qabto, iyagoona dadkii ka qaybgelaayay u sheegay inaanan halkaasi wax munaasabad ahi lagu qaban karin.
Munaasabadan oo ay soo qaban-qaabiyeen dhalinyaro taageersan musharaxtinimada Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow ayaa aad uga xumaaday tallaabada lagu banaday munaasabadaasi, oo lagu soo casuumay dad u badan bulshada qaybaheeda.
Musharax Mustaf Dhuxulow oo xalay ka soo muuqday Warbaahinta ayaa Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Taliyaha Hay’adda Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka (NISA), Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ku eedeeyay inaanay doonayn in dalka ka dhacdo doorasho lagu tartamo.
“Waxaa cad in aysan ogoleyn in dalkan ay doorasho ka dhacdo, waxaa cad in aysan ogoleyn in lala tartamo, waxaa cad inay rabaan in dalka ay ku haystaan xukun keli talisnimo ah. Farmaajo dalkan waa lagu soo dhaweeyay, Ra’iisal Wasaaraa loo magacaabay waa laga qaaday, waa loo bannaanbaxay, doorashuu galay Madaxweynuu noqday, labadii Madaxweyne ee hore ayaa gacanta qabtay, wixii ka dambeeyayna waala oggaa. Qof uu xiro iyo qof uu eedeeyo, weliba iska daa isagoo Madaxweyne dalka ka ah ayaa waxaa laga yaabaa inuu dacaayad joogto ah iyo caay uu ku wado dadka musharaxiinta ah.” Ayuu yiri Musharax Mustaf Dhuxulow.
Waxa kaloo uu yiri “Waxaa muuqata inay jirto qorshayaal dadka madaxda u tartamaya lagula dagaalamayo ama handadayo, hala xiro ama barnaamijyadan hala joojiyo, arrintaas oo runtii keeni karta dhibaato fara-badan.”
Dhuxulow ayaa xusay inaanan Madaxweyne Farmaajo iyo Taliyaha NISA lagu aamini karin dalka iyo dadka, isagoona shacabka ugu baaqay inay ka arrinsadaan xaaladda uu dalku marayo.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in iyagoo ah siyaasiyiintii dalka ka shaqeynayay ah ay bartilmaameed u noqdeen Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, iskaba daa taageere-yaashooda.
“Dadka Soomaaliyeed meel walboo ay jooggaan waxaan u sheegaa inaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Taliyihiisa Nabad Suggida, Fahad Yaasiin aan dalka iyo dadka lagu aamini karin. waxaana runtii ugu baaqaa in dadka Soomaaliyeed ay ka tashadaan, talana ka yeeshaan, sababta waxay tahay anagii madaxda ahayn oo dadka dhan yaqaanay oo dalka ka soo shaqeeyay, oo siyaasadda uga horeynay ayaa meel aan ka marno la’, oo nafteena ay maanta halis ku jirtaa, dadka na taageeraayay iska dhaaf. Maxaad u maleynee dadka shacabka ee Soomaalida ah ee fekradahooda qabo?” Ayuu yiri Dhuxulow.
Xaalad jahwareer ah ayaa maalmihii la soo dhaafay ka jirtay Magaalada Muqdisho, taa oo ka dhalatay bannaanbaxyada ka dhanka ah Dowladda Federaalka iyo is hortaagga ay dowladda ku sameynayso bannaanbaxyadaasi, oo ay gadaal ka riixayaan Golaha Midowga Musharaxiinta.